छठको अवसरमा अष्ट्रेलियाबाट ‘सूर्य चन्द्र अंकित मेरो देश’ सार्वजनिक ! (भिडियोसहित) « MNTVONLINE.COM
छठको अवसरमा अष्ट्रेलियाबाट ‘सूर्य चन्द्र अंकित मेरो देश’ सार्वजनिक ! (भिडियोसहित)
भिक्टोरियाका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत कार्यालयले १२ औं वार्षिकोत्सव र छठ पर्वको अवसरमा ‘सूर्य चन्द्र अंकित मेरो देश’ बोलको राष्ट्रिय गीत सार्वजनिक गरेको छ । गीतमा पत्रकार एवं साहित्यकार निरु त्रिपाठीको शब्द, बरिष्ठ संगीतकार न्ह्यू बज्राचार्यको संगीत तथा नेपाल आइडल सिजन–२ की प्रतियोगी तथा अहिलेकी चर्चित गायिका अस्मिता अधिकारीको आवाज रहेको छ । जीवन रसाइलीको निर्देशनमा बनेको भिडियोको छायाँकन मेलवर्नमै गरिएको हो । गीतमा मेलवर्नमै रहँदै आएका नव कलाकार समृद्धि (शाम) हाडा, राहुल गजमेरलगायतले अभिनय गरेका छन् ।
बर्दिबास बालिका हत्या प्रकरणः प्रहरीको गोली लागि घाइते युवकको मृत्यु !
दशकका उत्कृष्ट खेलाडीको मनोनयनमा परे पूर्वकप्तान पारस खड्का